QAJAAR SHIINEYS: SHARRAXAADDA NOOCYADA UGU FIICAN - BEER CAGAARAN
Mucjisooyinka dibadda: noocyada qajaarka ee Shiinaha
Haddii aad waligaa la qabsatay qajaarka, oo ah, raadinta noocyo ku habboon ee sirqoolladaada, ka dibna waxaad u maleyneysaa in weedhahan oo kale ah sida "qajaar shiineys ah".
Tani ma aha noocyo gaar ah oo gaar ah, waa noocyada oo dhan, miraha iyaga oo leh laba muuqaal, kuwaas oo ah, qaab muuqaal ah oo dhererkiisu yahay 50 - 80 cm.
Kala duwan Tani qajaar ah waa ku fiican yahay bannaanka tijaabin, kuwaas oo horay u noqday caajis ah ee noocyo caadiga ah ee this bocoriga this.
Marka ugu horeysa ee aad marka hore aragtid miraha khafiifka ah marka ugu horeysa, waxaad hubaal ahaan dooneysaa inaad iyaga ku korodho goobahaaga.
Waa hagaag, tixgelin noocyada ugu fiican ee ka dhigaya qadarka "Qajaarka Shiinaha".
Kala sooc "mucjisada Shiinaha"
Kala duwan oo kala duwan, miro diyaar ah ayaa laga saari karaa baadiyaha 60 ilaa 70 maalmood ka dib caleemaha kowaad.
The duurka naftooda waa kuwo aad u dheer, leh xididdada xoog leh. Miraha ayaa ah qaabka cylindrical, qaab wax yar, wax yar oo tubercles ah, dheer (40-50 cm), macaan, iyo jirin qadhaadh jidhka ama maqaarka khafiif ah.
Qajaaradaas si fiican u dulqaadashada gaadiidka. Ku habboon raashinka ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale qasacadaysan. Si aad u darsato khudaarta cagaaran ee xabagta, si fudud u googooyaa qaybo waaweyn. Buundooyinku waxay u badan yihiin kuwo miro badan, oo aan saameyn ku yeelan cudurada.
Inkasta oo ay ka baxdo dibadda, dhirta kala duwan ee noocaan ah waa inay bilaabaan inay koraan geedo. Waxaa jira wakhti badan oo lagu beero abuurka, waqtiga saxda ahi wuxuu ka bilaabmaa bilawga bisha Maarso iyo dhammaadka bisha Abriil. Daryeelidda geedo waa caadi, taas oo ah, waraabinta joogtada ah, geedo beerto, qaadashada wajiga of 1 - 2 caleemo.
Qodobka abuurku waa inuu noqdaa qiyaastii 3-4 cm Nidaamka beeritaanka ku haboon wuxuu noqon karaa 150-40 cm. Qalabaynta geedo ayaa si fiican loo qabtaa dhammaadka May - bilowgii Juun, si ay dhulka u diiriso.
Kala duwan Tani waa mid aan qabyo ahayn ee daryeelka, duurka u badan oo iftiin iyo kulayl. Sidaa darteed, meelaha leh cimilada diiran, dhirta waxaa lagu beeray karaa dhul furan. Meesha ay tahay hargab, waxaan u baahan nahay koriyo si ay u koraan noocyada kala duwan.
Buundooyinka waxay noqon doonaan waraabin joogta ah oo joogto ah, dabacsan ciidda ku hareereysan, lakabka yar ee mulch, iyo sidoo kale dhowr dhaymo. Tan iyo caleemaha of duurka u yihiin muddo dheer ku filan, waxaa lagula talinayaa in ay fuliyaan garter ee duurka, taas oo ka dibna u fududeynaysaa habka goosashada.
U kala saar "raaxo cad"
Natiijada shaqada ee Shimbiraha Shiinaha. Magaca noocyada kala duwan waxay ka timaadaa midabka qoyan ee miro - waxay ku dhowyihiin caddaan, waxaa ku jira midab yar oo cagaaran. F
o Bisaylka caadada ayaa hoos imanaya qaybta noocyada bartamaha xilliga. Celcelis ahaan, 45-50 maalmood waxay ka gudubtaa xilliga soo ifbaxa geedo si qibrad farsamo ah ee miraha. Buundooyinku waxay xididada labadaba ku leeyihiin dharbaaxada iyo hoosteeda hoosteeda. Dhirta ayaa ku filan
Dhiroonka qaasatan ma ahan mid dheer, 12-15 cm oo keliya, oo aan ku filneyn noocyada kala duwan. Miraha waa mid sarreeya, furfuran, leh dusha caadiga ah ee dhaqanka, taas oo ah, tuberculate, oo dhadhan weyn leh.
Diirka waa mid aad u jilicsan, iyo saxarka ma dhadhamo qadhaadh. Miraha waa mid aad u dhadhan fiican ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale qasacadaysan. Wax-soo-saarka wuxuu ka dhigayaa qiyaastii 4 kg hal barkeed. Kala duwanaanshuhu waa mid u adkeysanaya cudurrada.
Dalagyada waxay u baahan yihiin inay bilaabaan geedo, beereedka abuurka ah in la soo saaro bisha Maarso. Marka geedo soo biqlo, ka dibna duub balaastig ah, kaas oo waa inay daboolaan weelasha leh miraha, waa in laga saaro. Marka caleemaha 1 - 2 ay muuqanayaan caleemaha, dhirta waa in lagu naqshadaa weelal fara badan. Ka hor inta aan la qaadin iyo ka dib geedo waa in la waraabiyaa oo la bacrimiyo si ay ufilan yihiin ka hor inta aanad transplanting dhulka.
Marka dhirta ay gaarto da'da 30 maalmood, waxa ay noqon doontaa waqti loogu talagalay transplanting. On aagga unit aad ku heli kartaa 3 duurka.
Kala duwan tayada si fiican ayaa u adkeyneysa xaaladaha cimilada, isbedelka heerkulka, isbeddelka qoyaanka hawada. Taasina waa sababta ay duurka ufudud ugu tahay daryeelka. Si dhirta si ay u bixiyaan goosashada wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in ay waraabiyaan duurka si joogto ah, iyaga oo quudiya, iyo sidoo kale isku dayaan hab kasta oo suurtogal ah si looga hortago dhismaha qolof ah.
Daqsiyaadka duurka, waa suurad wacan in la xiro ilaa taageerada, ka dibna dhirta ayaa arki doona wax badan oo farxad leh.
Waxaa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan noocyada ugu wanaagsan ee yaanyada.
Fasalka "Shiinaha Shiinaha"
Dhexdhexaad ah qajaar hore, kaas oo loo doortay beerista ee lagu koriyo. Xeryahan ee noocyada kala duwan yihiin kuwo aad u awood badan, jeexjeexan, horumarin degdeg ah, iyo sidoo kale midho dhaadheer muddo dheer. Miraha waa mid aad u dheer (ilaa 50 cm), qaabka arc, cagaar mugdi ah oo midab leh, oo leh tubbooyin waawayn laakiin naadir ah iyo qol yar oo yaryar.
Dhadhanka waa qurux badan, miraha way macaan yihiin mana gabi ahaanba qadhaadh. Cufnaanta miraha waa celcelis ahaan, miraha jidhka oo aan la arki karin, oo ay duurka u saameynayaan badi cudurada qajaarka ee la yaqaan.
Geedo beerto waa in la sameeyaa 25 ilaa 30 maalmood ka hor intaan lagu beerin dhulka. Geedo lagu beeray karaa lagu koriyo kuleylaha kulul ee horaantii May, iyo aqalka dhirta aan kuleylka lahayn ama si aad dhulka ugu furto kaliya dhamaadka bilaha la cayimay.
Geedo u baahan tahay hubso inaad meel ku dhashosi ay geedo yihiin xoog leh ku filan. Waxaad ubaahan tahay inaad abuurto miraha grooves si qoto dheer ah 1.5 - 2 cm. mitir ayaa prikopat ka badan karaa 3 geedo. Ciidda qajaarkan waa inuu ahaadaa mid bacrin ah, si fiican u neefsan kara. Si loo kordhiyo helitaanka hawada dhulka, waxaad ku dari kartaa balka ama caleemaha dhulka.
Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo duurka buuggan qajaarka si joogto ah oo wanaagsan. Sidaa darteed, habka waraabinta waa in aysan aheyn wax khasaare ah, si loo magdhabo la'aanta qoyaanka waa in ay si joogta ah u noqdaan sida loo baahan yahay, iyo biyaha waa in ay kululaadaan.
Ku darso duurka sidoo kale waa inay ahaato dhowr jeer, waana in la isku daraa waraabinta biyaha iyo bacriminta, maaddaama nafaqooyinka sidan si dhakhso ah u dhici doona dhulka. Ku darsashada caleemaha taageerada ama aan ahayn - waa go'aankaaga shakhsi ahaaneed. Buundooyinka ayaa si deggan u degganaan doona labadaba.
Fasalka "Flow Emerald"
Bacriminta, midhaha shaqada ee dhaqanka Ruushka. Xilliga dhexe, miraha waxay u bislaadaan 44 - 48 maalmood ka dib dhalidda geedo. Galka ayaa ah fayruska (parthenocarpic). Bushasku waa mid adag, laakiin si fiican ayuu u shaqeeyaa. Miraha waa muddo dheer (illaa 50 cm), qaabka cylindrical ee, cagaar mugdi ah midab leh, dhadhan fiican, maqaar khafiif ah, kaas oo lagu daboolay tubercles waaweyn.
Miraha waa mid aad u culus, kor u kaca ilaa 200 g oo miisaankeedu yahay. Sidaa darteed, badan oo goosashada - 15 - 18 kg halkii 1 square. mitir Buundooyinka midho dhaadheer aad u dheer, mararka qaarkood waxay u baahan yihiin in la daboolo, maaddaama cimiladu mar horeba sii xumaatay. Dalagyada kala duwan ee noocaan ah maaha mid xashiishad ah, xeelado si aad u deg deg ah uga badbaado la'aanta iftiinka qorraxda, iyo sidoo kale heerkulka hooseeya.
Beeridda abuurka ah ee geedo waa in la sameeyaa badhtamaha April. Awoodda geedo waa inay ahaataa mid aad u ballaaran si ay xididadu u raaxaystaan ​​oo ay helaan meel ku filan. Soil waa ka wanaagsan yahay in la iibsado, maadaama ay ku kobcisay xubno waxtar leh.
Si geedo ahaayeen xoog leh, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u quudiso geedo. Dib u soo celinta ciidda waa ay adag tahay in la sameeyo ka dib markii dhaxan ay dhaafeen, laakiin geedo ayaa loo wareejin karaa aqalka dhirta kulul ee xitaa horaantii. caadiga ah degitaanka - 70x30 cm
Isla markii la beero kadib, dhulka hoostiisa daaqsinka waa in la waraabiyaa oo lagu daboolaa polyetyloolka madow si biyuhu u dheeraadaan ciidda. Laakiin mararka qaarkood waa in la daboolo baahida loo qabo in laga saaro, in saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo aysan waxyeelayn nidaamka asaasiga ah ee duurka.
Waxaa lagugula talinayaa in aad isticmaasho taageero dheeraad ah qaabka trellis ama xarigga lagu kala fidiyo inta u dhaxaysa jilciyada si joogto ah u soo riixay dhulka. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu baadho duurka buuggan 2 jeer toddobaadkii. Marmarka qaarkood dhirta waxaa lagu quudin karaa xal of HOL.
Fasalka "kulaylka Shiinaha"
Hybrid pollinated by bees. Waxay ka tirsan tahay qajaarka dhexdhexaad ah iyo qajaarka, oo ku dhufta 48-54 maalmood. Buundooyin xoog leh, xoog leh, oo jilicsan. Asal ahaan, stem qudh ah ayaa la sameeyey dhirta. Miraha waa mid aad u qurux badan, xitaa, dhererka ku habboon noocyo kala duwan ee qajaarka (30-50 cm), cagaar mugdi ah, leh dhadhan cajiib ah iyo caraf udgoon.
Qaabka qajaarkan waa cylindrical, diirka oo leh tubercles. Kala duwanaantu waxay u adkaysataa maaha oo keliya xayrta budada ah, xagta oo bararsan, iyo fusarium wilt, laakiin sidoo kale heerkulka sare. Xitaa haddii heerkulka uu gaaro 35 C, duurka waxay weli koraan si badbaado leh oo midho u dhali karaa.
Wakhtiga looxa saarista abuurka ah ayaa la fidiyaa bilawga Abriil ilaa bilowga Maajo. Waxaad ka boodi kartaa beerista geedo iyo beerashada si toos ah dhulka dhulka qaybta labaad ee May. Laakiin habkan ee sii kordhaya sariirta beerta mustaqbalka waxay ka fiican tahay inaad qariso, si ay u soo galaan waa inay noqdaan. Waa lagama maarmaan in heerkulka ciidda uu gaaro 20-25 -25C, haddii kale abuurka ma gegi doono.
Kala duwan tani waxay ku habboon tahay koriyo iyo beeraha caadiga ah. Dhirta Kuwani waxay u baahan doonaan iftiin badan, laakiin ha ka welwelin qaylo gaar ah, sababtoo ah nooca kuleylka ma cabsanayo.
Waxaa lagama maarmaan ah in la boodo geedo ama ku abuurto abuurka sariir gooni ah, oo ka soocaya noocyo kale oo qajaar ah, haddii kale waxaa jiri doona isbeddel, waxaadna heli doontaa midho goosad ah oo ka mid ah qajaarka kale. Nidaamka degitaanka - 50x70 cm.
Daryeelka qajaarkan qaasatan maaha mid si qaas ah. Kala duwanaantan waxay soo saartaa dhowr caruur ah, sidaas darteed waad ka boodi kartaa hannaanka shaqo joojinta. Waxaa lagu talinayaa in la hagaajiyo caleemaha duurka ee trellis, iyo taageeradu waa inay ahaato mid xoog leh, haddii kale waxay si fudud u jebin doonaa miisaanka midhaha.
Biyaha duurka inta badan waxay u baahan yihiin, 2 - 3 jeer toddobaadkii. Laakiin waxay ku xiran tahay cimilada. Haddii ay roobabku da'ayaan, markaa waxaad xadayn kartaa hal biyo ama xataa biyo. Laakiin haddii uu jiro abaar waddada, iyo dhulka bilaabeen in ay jabaan, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in ay biyo this, iyo aad u badan.
Si looga fogaado muuqaalka daloolka culus ee cufan, xayawaanka waa in si fiican loo daboolaa, laakiin tani waa in si taxadar leh loo qabtaa si aanay u dhaawacin nidaamka xididka duurka.
Kala saar "" alligator "
Gardarro hore u pollinated by bees. Miraha ayaa diyaar u ah inay cunaan 46-48 maalin kadib caleemaha ugu horreeya. Buundooyinka waa kuwo awood leh, si dhakhso ah u koraan, tiro badan oo daaqsinka ah. Miraha waxay u egtahay noocyo kala duwan, taas oo ah, qaabka cylindrical, halkii dheer (35-40 cm), midab cagaaran oo buuxa, tuberculate.
Diirka waa dhuuban yahay, dhalaalaya, oo aan qadhaadh lahayn. Saxarka waxaa ku jira xaddi weyn oo casiir ah, macaan, macaan oo aad u macaan. Wax-soo-saarka waa mid aad u sarreeya, 16-18 kg mitir labajibbaaran oo sariir ah.
Kala duwanaantu ma saameynayso cagajoogga, xashiishada budada ah iyo miro-qajaar, laakiin waxaa laga yaabaa in waxoogaa yar ay ku dhacdo xagta oo caaradaysan. Kala duwanaanta noocaas ah waxay udhaxeysaa wakhti aad u dheer, oo sax ah illaa bartamihii Oktoobar. Miraha way wanaagsan yihiin labadaas cusub iyo qasacadaysan.
Ku habboon ciidda. Waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo geedo, soo saarista taas oo ah mid la jecleysan karo in la sameeyo wax yar ka hor qeybtii hore ee bisha Abriil. Geedo adag oo leh caleemo 1 - 2 waa in lagu dhufto dheriyo waaweyn.
Daryeelidda geedo waa heer, taas oo ah, waraabinta joogtada ah, arjiga bacriminta, iyo sidoo kale bixinta geedo leh iftiin iyo kulayl ku filan. Marka geedo ku gaaro da'da 30 - 35 maalmood, waa la bedeli karaa.
Bisilis waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo qeybta labaad ee bisha Maajo., ama xitaa bilowga June, si ay dhulka u diirimaan si fiican. Haddii aad rabto in aad hesho goosashada hore, ka dibna 10 maalmood ka hor beerashada qorsheysan ee dhulka waa in lagu daboolaa polyetylen madow, kaas oo kulmi doonaa kulaylka. Marka geedo waxaa la dhigayaa dhulka, waxaa sidoo kale waa suurad wacan in lagu daboolo dhulka ku wareegsan leh polyetylen.
Qaadashada duurka waa mid caadi ah. Waraabin joogto ah biyo diirran, iyo sidoo kale buufinta duurka ku jira cimilada daruuriga ah waa xiriir muhiim ah oo ku yaala silsiladaha duurka.
Bacriminta joogtada ah leh Bacriminta macdanta, iyo sidoo kale daaweynta fungicide, waxay sidoo kale ka faa'iideysan doonaan dhirta. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa ha ku dhaafin kiimikadahaddii kale miraha waxay noqon doonaan sun. Sida nooc kasta oo qajaar ah ee noocan oo qajaar ah, waxaa lagugula talinayaa in la hagaajiyo dhirta "Alligator" on trellis wanaagsan, waxay u fududaan doonaa iyaga daryeela iyaga iyo ka dib goosashada.
Qajaarada Shiinaha laguma rujin doono midhahooda, laakiin waxay kugu farxi doonaan oo keliya mawduucooda. Qoyskaaga ma aha oo kaliya yaabay by dhadhanka fiican ee midhaha, laakiin sidoo kale ay muuqaalkooda. Sidaa darteed, waxaad hubaal ahaan labadiinaba adiga iyo dadka aad jeceshahay. Nasiib wacan